तालिबानले लागू गर्ने भनेको शरिया कानून के हो ? | khaltinews.com
तालिवानले लागू गरेका नियम बिशेषतः महिलाहरुका लागि निकै तानशाही थियो । ति नियम र कानुनले महिलालाई पढ्न, विद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको थियो । महिलालाई घरमै रहने र लामो पहिरनले आफुँलाई ढाकेर राख्ने जस्ता अत्याचारी नियमहरु रहेका थिए ।
२०७८ भदौ २
काठमान्डौ। अमेरिकी सैनिकहरुको बार्हिगमनसँगै अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता आफ्नो बनायो । अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीले सत्ता र देश दुबै छाड्नुभयो र तालिवान २० बर्षपछि पुनः शासनमा आएको छ ।
तालिवानको आगमनसँगै अफगानिस्तानमा तरङ्ग पैदा भएको छ आखिर अब अफगानिस्तानको बाघडोर कसरी अघि बढ्छ ?
२० बर्ष पहिले अफगानिस्तानमा तालिवानले लागू गरेको निरंकुश शासनबाट पिल्सिएका अफगानी नागरिकहरु फेरि तालिवानको आगमनले पुनः त्यहि निरंकुश र अमानविय शासन र नियम लागू हुने त्रासमा रहेका छन् ।
अहिले पुनः तालिवानले सत्ता हत्याएपछि महिलालाई वस्तु र साधनको रुपमा मात्रै परिभाषित गरिएका तिनै कानुन र नियमहरु लागू हुने हुन् कि भन्ने सबैलाई चिन्ता छ ।
तर सत्ता आफ्नो बनाएपछि सन् २०२१ अगस्त १७ (२०७८ भदौ १ गते) पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेको तालिवानले महिलाहरुलाई नियमले नबाध्ने र शरिया कानूनले भनेझै उनीहरुलाई हक र अधिकारहरु दिइने भनेर भन्यो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तालिवानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
आखिर तालिवानले महिलाहरुलाई हक अधिकार दिने भनेको शरिया कानून के हो ?
शरिया भनेको इस्लाम परम्पराको धार्मिक कानून निर्माणको एउटा हिस्सा हो । शरिया कानून इस्लामको कानुनी प्रणाली हो । जुन कुरान र इस्लाम गुरुहरुको वचनहरुमा आधारित रहेको हुन्छ । यसले आधुनिक मुस्लिमहरुलाई दैनिक क्रियाकलापदेखि व्यक्तिगत विश्वास र आस्थाका हरेक क्षेत्रमा अल्लाहको इच्छा अनुरुप पालना गराउन नियमका रुपमा काम गर्दछ ।
शरिया कानून पैगम्बर मोहम्मदको वचन, शिक्षा र अभ्यासमा आधारित मौलिक कुरान र शुन्नाको शिक्षामा आधारित रहेको छ ।
शरिया कानूनमा महिलालाई कानूनी र आर्थिक निर्णयको अधिकार दिइएको छ । यसका आधारमा महिलाहरुसँग उतराधिकारीको हक पनि हुन्छ । कुरानमा पनि भनिएको छ कि महिलाहरुमा उसको दाजुभाइले पाउने पैसाको आधा मात्रै पाउने अधिकार छ ।
शरियाका आधारमा महिलाहरुले अदालतमा गएर साक्षीका रुपमा वयान दिन सक्नेछन् । तर उनीहरुको वयान पुरुषको भन्दा आधा मात्र मान्य हुनेछ । यदि कुनै वयानका लागि २ पुरुष नभेटिएमा १ पुरुष र २ महिलालाई साक्षीका रुपमा वयान दिन ल्याउनु भनेर कुरानिक पदमा भनिएको छ ।
यस्तै कुरानमा महिलाले आफ्नो सुन्दरता आफ्नो परिवारबाहेक अरु कुनैपनि पुरुषलाई देखाउनु नहुने उल्लेख छ । यसका लागि धेरै इस्लामिक न्यायशास्त्रीहरुले महिलाले आफ्नो कपाल छोप्नुपर्ने भनेका छन् भने केहीले अनुहार ।
कुरानका आधारमा निर्धारित भएका महिला र पुरुषका हक, अधिकारमा निकै ठुलो अन्तर छ ।
यस्तै, महिलाहरुलाई पढ्ने अनि काम गर्न दिने भन्ने कुरा शरियाका आधारमा निर्धारण गरिने पत्रकार सम्मेलनमा तालिवानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बताउनु भएको छ । इस्लामको घेराभित्र रहेर महिलाहरुलाई पढ्ने अनि काम गर्न अधिकार दिने र समाजमा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता रहने बताइएको छ ।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवानले अफगानिस्तानमा गरेको शासन, जुन इस्लामिक शरियाबाट निर्देशित थियो । त्यसका आधारमा तालिवानले महिलाहरुलाई पढ्न, स्कुल जान, काम गर्न प्रतिबन्ध गरेको थियो । यस्तै महिलाहरुले बुर्का लगाउनै पर्ने अनि कतै बाहिर जाँदा बुर्कासँगै पुरुषलाई साथमै लिएर जानुपर्ने जस्ता निंरकुस नियमहरु लगाएको थियो
यतिबेला संसारकै ध्यान अफगानिस्तानमा तालिवानको सत्ता कब्जाप्रति तानिएको छ । सबैले अब तालिवानले गर्ने शासन र देशमा लगाउने नियम र कानुनप्रति चासो राखेका छन् ।
कुरान र शरियाले तोकेको नियम अनि हकअधिकारमा भएको खाडललाई तालिवानले कसरी पुर्ला भन्ने सबैको चिन्ता हो । तालिवानले शरियाका आधारमा २० वर्ष पहिले गरेको निरंकुशतालाई नभुलेका अफगानी जनताले कसरी तालिवानको नयाँ देखिन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?
आन्तरिक युद्ध रहेपनि विगत २० बर्षमा अघि बढीसकेका र केही हदसम्म स्वतन्त्र रहेका अफगानी जनताहरुले फेरि कतिको स्वतन्त्र भई हिड्न, पढ्न, काम गर्न पाउलान् भन्ने अर्को ठुलो प्रश्न चिह्न ठडिएको छ ।
संसारभर अफगानी जनता बिशेषतः महिलाहरुको हक अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा सतहमा आउँदा के तालिवानको कानले यो सुन्ला त ?
खासगरी अफगानी जनताको मानव अधिकार, महिलाका हक अधिकार आदिलाई के तालिवानले रक्षा गर्न सक्ला ? अथवा पहिले झै तानशाही शासन नै लागू गर्ला भन्ने संसारकै महिला अधिकार र मानव हक अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको चासोको बिषय हो ।